"မန်ချက်စတာ ကို ကြွမယ့် မရှိခဏဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ရင်း အလှူငွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော်" - Cele Gabar
တင်ဇာမော်က ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ ၀န်းရံမှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီး၊လူငယ်မရွေး ချစ်ခင်အားပေးတာကို ခံနေရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Myanmar Idol Season 3မှာ မျိုးကျော့မြိုင်၊ ရန်အောင်၊ ဦးသိန်းတန်တို့နဲ့ အတူအကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
အလှူအတန်းလုပ်တဲ့ နေရာမှာ သဒ္ဒါတရားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ “တူညီတွဲလက်မောင်နှမများ” ပရဟိတ အဖွဲ့ မှာ စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ရေးမြို့မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် လှူဒါန်းငွေ (၁၀)သိန်းကျပ်နဲ့အဝတ်အထည်များ ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်များနှင့် ဆန်အိတ်များအား လှူဒါန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ “မန်ချက်စတာ ကို ကြွမယ့် မရှိခဏဆရာတော်ကြီး နဲ့လမ်းမှာ ဆုံတွေ့ ခွင့်ရလို့ကန်တော့ရင်း နဝကမ္မ အလှူငွေလည်း လှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်မှ ဆုံတွေ့ ရတဲ့ ညီမလေးနှစ်ယောက်နဲ့ လည်း တတွတ်တွတ်လုပ်ရင်း အလှပြင်ပေးကြတဲ့အပြင် ဈေးကူဝယ်ပေးကြတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဆိုပြီး တင်ဇာမော်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ ဖော်ပြထားခဲ့တာမို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ တင်ဇာမော်ရဲ့ အလှူအတွက် သာဓုခေါ်သွားပါဦး….
Source: Tin Zar Maw
“မနျခကျြစတာ ကို ကွှမယျ့ မရှိခဏဆရာတျောကွီးကို ဖူးမြှျောရငျး အလှူငှလှေူဒါနျးခဲ့တဲ့ တငျဇာမျော”
တငျဇာမျောက ပရိသတျတျောတျောမြားမြားရဲ့ ဝနျးရံမှုကို ပိုငျဆိုငျရရှိထားတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ လူကွီး၊လူငယျမရှေး ခဈြခငျအားပေးတာကို ခံနရေတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ Myanmar Idol Season 3မှာ မြိုးကြော့မွိုငျ၊ ရနျအောငျ၊ ဦးသိနျးတနျတို့နဲ့ အတူအကဲဖွတျဒိုငျတဈယောကျအနနေဲ့ စိတျရောကိုယျပါနဈပွီး ပါဝငျဆောငျရှကျခဲ့သူတဈယောကျပါ။
အလှူအတနျးလုပျတဲ့ နရောမှာ သဒ်ဒါတရားထကျသနျသူတဈယောကျဖွဈပွီးတော့ “တူညီတှဲလကျမောငျနှမမြား” ပရဟိတ အဖှဲ့မှာ စိတျအားထကျသနျစှာလုပျကိုငျနသေူတဈယောကျပါ။ ရေးမွို့မှာရှိတဲ့ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူမြားအတှကျ လှူဒါနျးငှေ (၁၀)သိနျးကပျြနဲ့အဝတျအထညျမြား ၊ ခေါကျဆှဲခွောကျထုတျမြားနှငျ့ ဆနျအိတျမြားအား လှူဒါနျးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာတော့ “မနျခကျြစတာ ကို ကွှမယျ့ မရှိခဏဆရာတျောကွီး နဲ့ လမျးမှာ ဆုံတှခှေ့ငျ့ရလို့ ကနျတော့ရငျး နဝကမ်မ အလှူငှလေညျး လှူဒါနျးခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။လဆေိပျမှ ဆုံတှရေ့တဲ့ ညီမလေးနှဈယောကျနဲ့လညျး တတှတျတှတျလုပျရငျး အလှပွငျပေးကွတဲ့အပွငျ ဈေးကူဝယျပေးကွတာလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ”ဆိုပွီး တငျဇာမျောက လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာထကျကနေ ဖျောပွထားခဲ့တာမို့ သိခဲ့ရပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ တငျဇာမျောရဲ့ အလှူအတှကျ သာဓုချေါသှားပါဦး….
“ခိုင်သဇင်ငုဝါကို “ဖက်နမ်းချင်လို့”ပါဆိုတဲ့ စိန်လင်း”
ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး မိတ်ကပ်လင်းလင်းကို ရည်းစားစကားပြောခဲ့တဲ့ သုသု
“မေမေနဲ့အတူ အမှတ်တရဖြစ်အောင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းခွေလေးထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ရတနာမိုင်”
“တတျသိနားလညျတဲ့ လူကွီးတှကေိုပဈပယျပွီး ဗိုလျခြုပျရုပျရှငျရိုကျကူးနတေဲ့အပျေါ ပွငျးပွငျးထနျထနျဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျ မောငျမောငျမွငျ့”